स्वास्थ्य जीवनशैली | Nepstok
Category: स्वास्थ्य जीवनशैली
September 18, 2021 NepstokLeaveaComment on हुनेछ ७ दिनमै कालो अनुहार गोरो, अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
काठमाडौँ । मानिस आफ्नो अनुहार सकेसम्म गोरो बनाउन प्रयासरत हुन्छन्। बजारमा पाइने विभिन्न प्रकारका गोरो बनाउने क्रिमहरुको प्रयोगले छालामा नराम्रो असर पर्नसक्छ। अनुहारमा चमक पाउनको लागि हामी महँगा क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। तर हामी आफैँले थोरै दिमाग लगाउने हो भने घरेलु उपायहरु अपनाएर पनि अनुहार गोरो बनाउन सकिन्छ। अनुहार तथा छाला गोरो बनाउन निम्न १० […]
केवल ज्वराे आउनु मात्रै काे-राेनाकाे लक्षण हाेइन, यदि यी ३ लक्षण देखिएमा तुरुन्त लिनुहाेस् डाक्टरकाे सल्लाह ! पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी को- रोना भा-इरस संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिजरामीहरुमा भइरहेको छ । को- रोना भा-इरसले सबैभन्दा ‘सास फेर्ने क्षमतालाई असर गर्छ ।को- रोना बिरामी […]
September 10, 2021 NepstokLeaveaComment on महि नावारी ढिलो हुन्छ ? चाँडो गराउन यी ६ चिज खानुहोस् !
महि’नावारी ढिलो हुने गरेको छ अथवा कुनै कामविशेषले गर्दा निर्धारित मितिभन्दा चाँडै म’हिनावारी होस् भन्ने चाहनुभएको छ भने केहि खानपानमा सुधार गरेमा समस्याको समाधान गर्न् सकिन्छ । महि’नावारी चाँडो गराउन यी ६ खानेकुरा खानुहोस् फलफूल र तरकारी क्यारोटिनको मात्रा उच्च भएका फलफूल खाने गर्नाले महि’नावारी चाँडो हुन्छ । मेवा, फर्सी, गाजरजस्ता फलफूल र तरकारीमा क्यारोटिन […]
September 3, 2021 NepstokLeaveaComment on यस कारण बस्छ पाठेघर बाहिर बच्चा, हुनसक्छ आमाको ज्यानलाई खतरा
काठमाडौँ । कुनै पनि गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन जादाँ आफ्नो गर्भ पाठेघरभित्र बसेको छ छैन त्यसको समेत परिक्षण गराउनु पर्दछ। कतिपय अवस्थामा बच्चा पाठेघरमा नबसी पाठेघरबाहिर बसिदिन्छ । जो आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ। समान्यतया बच्चा पाठेघरमा हुर्किन्छ । तर, पाठेघरमा नबसी पाठेघरबाहिर बच्चा बस्यो भने यो जोखिमयुक्त हुन्छ। पाठेघरबाहिर फ्यालोपियन […]
July 17, 2021 NepstokLeaveaComment on पेट लाग्यो ? नआत्तिनुस् यस्ता छन सजिलै पेट घटाउने ८ तरिका !
बसीबसी गरिने काम, गलत खानपान र हर्मोन परिवर्तनको कारण मोटोपन बढ्दै जान्छ । मोटोपनको असर सबैभन्दा बढी पेटमा देखिन्छ र पेट बढ्दै जान्छ । योसंगै सुरु हुन्छ अल्छी लाग्ने तथा पेट लाग्यो भन्दै तनाव लिने काम । तर चिन्ता नलिनुस् पेटमा जमेको बोसो सजिलै घटाउन सकिन्छ । पेट घटाउन यी ८ उपाय अपनाउनुस् । १.आलस-आलसमा […]
July 6, 2021 NepstokLeaveaComment on खाडीको घामले शुक्र’कीटमा ह्रास, खाडीबाट फर्कने २० प्रतिशत पुरुषहरुमा समस्या देखियो ।
काठमाडौ : खाडीको चर्को गर्मीमा श्रम गर्नेहरुको शु’क्रकीटमा ह्रास आएको खबर आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।खाडीबाट फर्कने २०प्रतिशतपुरुषहरुमा शुक्र’कीटको गुण र संख्यामा ह्रा’स आएको परीक्षणहरुले देखाएका छन् । समाचार अनुसार कतार साउदी अरब र मलेसियामा काम गरी फर्केका युवा र तिनका पत्नी परामर्श तथा उपचारका लागि अस्पताल एवं निःसन्तान केन्द्रमा धाउने गरेका छन्।हरेक […]
एजेन्सी । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा मलद्वारमा पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो ।हामी मुला काचै या पकाएर खाने गर्दछौँ । के तपाईलाई थाहा छ ? पाइल्स रोकथामका लागि मुला सबैभन्दा अचुक ओखती साबित भएको छ । मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी […]
काठमाडौँ-छुदा पोल्ने र देख्दा पनि कडा जस्तो सिस्नोका बिभिन्न फाईदाहरु छन । सिस्नोमा फलाम ९आइरन०, पोटासियम, क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी र डी जस्ता पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यद्यपि, चेतनाको अभावका कारण गाउँघरमा अधिकांशले सिस्नो खाँदैनन् ।सिस्नो तरकालिको रुपमा पनि पकाइन्छ यसबाट बिभिन्न किसिमका फलाम पाइन्छ । यसले महिलामा हुने रक्तअल्पता र कमजोरी हुनबाट […]
काठमाडाैं । ज्वानोमा विभिन्न प्रकारका औषधिय गुणहरु पाइन्छन् । आयुर्वेदका अनुसार ज्वानोले मोटोपन घटाउन मद्दत गर्छ । ज्वानो खाँदा पाचनतन्त्र सक्रिय रहने भएकाले यसले कम्मर र पेटको बोसो कम हुन्छ ।ज्वानोको सेवनले शरीरका टोक्सिक पदार्थ बाहिर निस्किन्छ । र मेटाबोलिक पनि मजबुत बन्छ । यसले खाना पनि सजिल्यै पचाउन मद्दत गर्छ । ज्वानोको सेवनले शरीरमा […]